မရိုးနိုင်အောင် ဆက်ဆီကျတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ပုရိသတွေကို ဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ မော်ဒယ်လ် မလေး မိုးမြင့်သဇင် – Online News Post
မရိုးနိုင်အောင် ဆက်ဆီကျတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ပုရိသတွေကို ဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ မော်ဒယ်လ် မလေး မိုးမြင့်သဇင်
မိုးမြင့်သဇင် ဟာ ခေါင်မိုး ထပ်မှာ ဘောင်းဘီ အတို လေး နဲ့ မိမိုက် နေအောင် ပိုစ့်ပေး ဓါတ်ဖမ်း နေ တာ ဖြစ် လို့ ပုရိသတွေ ရင်ကို လှုပ်ခတ် သွားမိ မှာ အသေ အချာ ပဲမို့ ချစ် ပရိသတ် တွေ ကြည့်ရှု စေနိုင် ရန် အတွက် ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေး လိုက်ပါ တယ် နော်..။ ကဲ…. ပရိသတ် တွေ ကလည်း မော်ဒယ်လ် မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ ပုံလေး တွေ ကို ကြည့် ပြီး အသည်းလေး တွေ ပေးခဲ့ ဖို့ မမေ့ လိုက်ပါ နဲ့နော်..။ ဒါ့ အပြင် သူမ ရဲ့ ဆက်လက် လျှောက်လှမ်း မယ့် အနု ပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေကို လည်း ပရိသတ် တွေ က အားပေး ကြမယ် မလား..။
ပုရိသ ပရိသတ် တွေရဲ့ အသည်း စွဲ မော်ဒယ် တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ မိုးမြင့်သဇင် ကို မိတ်ဆက် ပေးစရာ မလိုလောက် အောင် သိကြမယ် ထင်ပါတယ် နော်..။ သူမ ရဲ့ ချစ် စရာကောင်း တဲ့ အပြုံး ချိုချိုလေး နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ တွေ က ပုရိသ တွေ ကို ဆွဲဆောင် နေ တဲ့ ထူးခြား မှု တွေ ဆို ရင်လည်း မှားမယ် မထင် ပါဘူး..။ သူမ ရဲ့ ဆက်စီ ကျကျ အမိုက်စား ပုံ လေး တွေ ဟာ ဆို ရင် လည်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ ပေါ် တွင် ရေပန်းစား လူကြိုက် များ တာလည်း တွေ့ရ ပါ တယ်..။
ယခု လက်ရှိ မှာတော့ သူမ က အနု ပညာ အလုပ်တွေ ကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင် နေတာ ဖြစ်ပြီး photo shooting အမိုက်စား လေးတွေ ကို လက် ခံ ရိုက်ကူးနေ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ဒါ့ အပြင် အောင်ြ မင်ပြီး ပရိသတ်ချစ် တဲ့ မော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ် အောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေ တာကို လည်း မြင်တွေ့ရ ပါ တယ်..။ ဘယ်လို ဖက်ရှင် လေးတွေ ပဲ ဝတ်ဝတ် တစ်နေ့ တစ်ခြား ပိုပြီး ထူးခြား လှပ လာတဲ့ မိုးမြင့်သဇင် ကတော့ အခု လက်ရှိ မှာ လည်း အမိုက်စား ပုံ လေး တွေ နဲ့ ခြွေချ လိုက်ပြန်ပါ ပြီ နော်…။
မိုးျမင့္သဇင္ ဟာ ေခါင္မိုး ထပ္မွာ ေဘာင္းဘီ အတို ေလး နဲ႔ မိမိုက္ ေနေအာင္ ပိုစ့္ေပး ဓါတ္ဖမ္း ေန တာ ျဖစ္ လို႔ ပုရိသေတြ ရင္ကို လႈပ္ခတ္ သြားမိ မွာ အေသ အခ်ာ ပဲမို႔ ခ်စ္ ပရိသတ္ ေတြ ၾကည့္ရႈ ေစနိုင္ ရန္ အတြက္ ျပန္လည္ ေဖာ္ၿပ ေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္..။ ကဲ…. ပရိသတ္ ေတြ ကလည္း ေမာ္ဒယ္လ္ မိုးျမင့္သဇင္ ရဲ့ ပုံေလး ေတြ ကို ၾကည့္ ၿပီး အသည္းေလး ေတြ ေပးခဲ့ ဖို႔ မေမ့ လိုက္ပါ နဲ႔ေနာ္..။ ဒါ့ အျပင္ သူမ ရဲ့ ဆက္လက္ ေလၽွာက္လွမ္း မယ့္ အႏု ပညာ လႈပ္ရွားမႈ ေတြကို လည္း ပရိသတ္ ေတြ က အားေပး ၾကမယ္ မလား..။
ပုရိသ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ အသည္း စြဲ ေမာ္ဒယ္ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ မိုးျမင့္သဇင္ ကို မိတ္ဆက္ ေပးစရာ မလိုေလာက္ ေအာင္ သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ ေနာ္..။ သူမ ရဲ့ ခ်စ္ စရာေကာင္း တဲ့ အျပဳံး ခ်ိဳခ်ိဳေလး နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွ ေတြ က ပုရိသ ေတြ ကို ဆြဲေဆာင္ ေန တဲ့ ထူးျခား မႈ ေတြ ဆို ရင္လည္း မွားမယ္ မထင္ ပါဘူး..။ သူမ ရဲ့ ဆက္စီ က်က် အမိုက္စား ပုံ ေလး ေတြ ဟာ ဆို ရင္ လည္း ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚ တြင္ ေရပန္းစား လူႀကိဳက္ မ်ား တာလည္း ေတြ႕ရ ပါ တယ္..။
ယခု လက္ရွိ မွာေတာ့ သူမ က အႏု ပညာ အလုပ္ေတြ ကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ ေနတာ ျဖစ္ၿပီး photo shooting အမိုက္စား ေလးေတြ ကို လက္ ခံ ရိုက္ကူးေန တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ဒါ့ အျပင္ ေအာင္ျ မင္ၿပီး ပရိသတ္ခ်စ္ တဲ့ ေမာ္ဒယ္ တစ္ဦးျဖစ္ ေအာင္ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားေန တာကို လည္း ျမင္ေတြ႕ရ ပါ တယ္..။ ဘယ္လို ဖက္ရွင္ ေလးေတြ ပဲ ဝတ္ဝတ္ တစ္ေန႔ တစ္ျခား ပိုၿပီး ထူးျခား လွပ လာတဲ့ မိုးျမင့္သဇင္ ကေတာ့ အခု လက္ရွိ မွာ လည္း အမိုက္စား ပုံ ေလး ေတြ နဲ႔ ေႁခြခ် လိုက္ျပန္ပါ ၿပီ ေနာ္…။
Previous post ပုရိသတွေ ကြွေဆင်းသွားစေမယ့် အမိုက်စား ပုံစံလေးနဲ့ မိမိုက်နေပြန်တဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
Next post တင်းကိတ်လှတဲ့ အတွင်းသားအလှတွေကို မပေါ်တပေါ်လေးနဲ့ ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ ခေးကြီးလုရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ